I-Pitt: I-GPA, izikolo ze-SAT, kunye noMTHETHO Olingeniswayo
Kubafundi nabazali Iigrafu zovavanyo
Izibalo zoLwamkelo lweeNyuvesi zasePittsburgh
Funda ngePitt kunye ne-GPA, i-SAT Score, kunye ne-ACT Score Data for Admission
Ngomlinganiselo wokwamkela u-55%, iYunivesithi yasePittsburgh iyisikolo esikhethiweyo. Abafakizicelo abaphumeleleyo baya kufuneka babe neeklasi ezinamandla kunye neemvavanyo zokulinganisa eziqhelekileyo kunye nokubonisa ukufezekiswa ngaphandle kweklasi. Abafundi abanomdla kwisikolo baya kufaka ukungenisa isicelo esibandakanya i-SAT okanye i-ACT izikolo. Iyunivesiti ayifuni isicatshulwa okanye iileta okanye isincomo.
Kutheni Unokukhetha iYunivesithi yasePittsburg
Ikhampasi ye-132-ekreji yaseYunivesithi yasePittsburgh ibonakala ngokulula kwiCathhedral of Learning, isakhiwo semfundo esona side kunazo zonke e-US I-campus inandipha ukusondela kwamanye amaziko ahlonishwayo kuquka uCarnegie Mellon University kunye neYunivesithi yaseDuquesne . Kwiphambili yezemfundo, uPitt unamandla amaninzi kuquka ifilosofi, iyeza, ubunjineli kunye nezoshishino. Kwiimidlalo, i-Pitt Panthers incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference ye-Atlantic Coast . Imidlalo evelele ibandakanya ibhola lebhola, ibhola lebholabhasi, ibhola lebhola, ukubhukuda, kunye nomzila kunye nensimu
Iyunivesiti ihlala iphakathi kweenyuvesi eziphakamileyo ezingama-20 e-US, kwaye iinkqubo zayo zophando ezinamandla ziye zathola ubulungu kuMbutho oManyeneyo waseMelika. U-Pitt unokuziqhayisa ngesahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla ayo kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi. Ngeyunivesithi ububanzi kunye nobukhulu bamandla, kufuneka ukuba kungenangothuko yokuba liphakathi kweekholeji zase-Pennsylvania kunye neeyunivesithi , iikholeji ze-Middle Atlantic kunye neeyunivesithi , kunye namaziko ephakamileyo aseburhulumenteni karhulumente .
IYunivesithi yasePittsburgh iGPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi yasePittsburgh GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQinisekisa ukungena. Jonga i-graph-time real and count your chances of entry in this tool free from Cappex. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions yePitt
Ukwamkelwa kwiYunivesithi yasePittsburgh kukhetha-nje nje isiqingatha sabantu abafake izicelo abasamkelekileyo. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Njengoko ubona, uninzi lwabafundi abangenayo babe "B +" okanye amanqanaba aphakamileyo, amanqaku e-SAT malunga ne-1150 okanye ngaphezulu, kunye namanqaku angama-composite angama-24 okanye ngaphezulu. Ukuphakamisa amanani, kunokwenzeka ukuba ufumaneke. Emva kwendawo eluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza phakathi kwegrafu ngabafundi abomvu (abafundi abachasiweyo) kunye nabafundi abaphuliweyo (abafundi abadibeneyo), ngoko kubalulekile ukukhumbula engqondweni yokuba abanye abafundi abaneGPA eziqinileyo kunye namanqaku okuvavanya bafunyanwa yiPitt.
Nangona kunjalo, uPitt unabamkelekile ngokupheleleyo , ngoko abafundi abakhanyayo kwezinye iindawo bangamkelwa nangona amabakala abo okanye amanqaku okuvavanya angaphantsi kokufanelekileyo. Kwenye, iYunivesithi yasePittsburgh ifuna ukubona i-GPA enhle, kodwa iimeko ezicelomngeni ezifana ne-AP, IB kunye ne-Honors. Kwakhona, i-Pitt iya kuqwalasela izinto ezikhethiweyo zokuncedisa, iimpendulo ezincinci zempendulo ezimfutshane kunye neenobumba ezivuthayo zinconywa ziyakomeleza isicelo. Ekugqibeleni, njengezikolo ezininzi ezikhethiweyo, ukubonakalisa ubunzulu kunye nobunkokheli kwimisebenzi yakho yexesha eliqhelekileyo kuya kusebenza.
I-Pitt iye yavuma ukufakwa , kodwa ngokuqinisekileyo kuya kulungele ukufaka isicelo ngaphambi kokuba iindawo kunye neerhafu zemali zifundiswe.
I-Admissions Data (2016)
Ukuba uthelekisa izikolo ze-SAT kwiikholeji eziphezulu zasePennsylvania , uya kubona ukuba iPitt ichanekile phakathi komxube xa kuziwa ekukhetheni.
IYunivesithi yasePittsburgh Ukwamkela: 55%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 590/680
ISAT Math: 600/700
UMTHETHO WOMTHETHO: 27/32
UMTHETHO IsiNgesi: 26/33
UMTHETHO UMathe: 26/31
Iinkcukacha ezininzi zeYunivesithi yasePittsburgh
Nangona iimvavanyo zakho zemfundo zijoliswe kwiYunivesithi yasePittsburgh, qiniseka ukuqwalasela ezinye izinto ezifana nokugcinwa kunye nezindleko zokugqibela, iindleko, uncedo lwezemali kunye neminikelo yemfundo.
Ubhaliso lwabonke: 28,664 (19,123 iidanga lokugqibela)
Ukuphazamiseka kwesini: 48% Amadoda / 52% Abafazi
Isifundo kunye neMali: i-18,618 i-$ (kwi-state); $ 29,758 (ngaphandle kwe-state)
Iincwadi: $ 680
Igumbi neBhodi: $ 10,950
Ezinye iindleko: $ 2,534
Iindleko ezipheleleyo: $ 32,782 (kwi-state); I $ 43,922 (ngaphandle kwemeko)
IYunivesithi yasePittsburgh ngezeMali (2015 -16):
Ipesenti yabafundi abafumana uncedo: 77%
Ipesenteji yabafundi abafumana iintlobo zoncedo
Izibonelelo: $ 11,450
Imali: $ 10,026
I-Popular Majors: I- Accounting, i-Biology, UkuBhala koBucala, iMali, iMbali, ukuThengisa, ukuLondolozwa, iNzululwazi kwezoPolitiko, iNzululwazi, iNtetho kunye nokuHlola kweeNgxelo.
Ukugcinwa kwabafundi be-First Year (abafundi bexesha elipheleleyo): 92%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka engama-4: 64%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 81%
Imidlalo Yabantu: Ibhola, Ibhola lebhola, iBhola yebhola, iBhola, Ukubhukuda, ukulwa, iThenti
Imidlalo Yabasetyhini: I- Volleyball, Ukubhukuda, Umkhondo, I-Softball, iChola, i-Gymnastics
Ukuba uthanda iYunivesithi yasePittsburgh, Unako ukufana nalezi zikolo
Abafake izicelo ku-Pitt bavame ukusebenzisa kwezinye iifuni zikarhulumente eziqinileyo ngaphakathi kwenkqubo yokuqhuba imini kuquka nePenn State , iOhio State , ne- UConn . Zonke izikolo ezithathu zinezinga lokumkela elifana nePitt, nangona amanyathelo okufundela angaphezulu kwi-Ohio State.
Abafakizicelo be-Pitt bavame ukujonga kwiiyunivesithi zabucala ezifana neYunivesithi yaseBoston , iYyunivesithi yaseSyrase , kunye neYouth University . Izikolo ezikhethileyo ezifana neDuke University kunye neYohn Hopkins University nazo zikhethwa ngokukhethekileyo, kodwa khumbula ukuba ezi zikolo ziya kufuna irekhodi elongezelelekileyo lemfundo kunye nerekhodi yexesha elingaphandle kwePitt.
I-University of Pace GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Wentworth Institute of Technology i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yeNtshona Washington i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi eBloomsburg yasePennsylvania iGPA, iSAT kunye ne-ACT Data
E-East Carolina University GPA, SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yeNkundla YeGeorgia ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Bryn Mawr College I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Illinois Institute of Technology i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yase-Chicago State i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Evergreen State College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseOregon GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iingcaphuno Ngenkalipho Evela KwiNgonyama Yenkomo
Iimpawu zeMariya Intombi kunye neMimangaliso eGuadalupe, eMexico
Ifomu yeNgcaciso yeSayensi yeFree Printable
Kutheni i-Pool ijika i-Blonde Hair Hair Hair?
I-Corban University Admissions
Idioms kunye neenkcazo kunye nokwenza
IYunivesithi yaseWisconsin-Superior - I-Admissions
I-DNA Inkcazo: Uhlobo, Ukuphendula, kunye nokuguquka
KwiiWebhsayithi ezinkulu ze-Skyscraper
I-Shield Volcanoes: Ingqwalaselo
Ukujongana nokukhutshwa ngokukhutshwa kwi-Delphi Build Configurations
Ukuloba iBass Nge-Shad Spawn
Indlela yokuBhalisa njengeCandelo likaRhulumente
Isikhokelo se-Whitewater Kayaker ku-Eddies, i-Eddy Lines, ne-Whirlpools
Yintoni abafundisi abayifunayo kwiCandelo labachaphazelekayo
I-Athrom ye-Atom yoMgangatho weMandla Isibonelo Inkinga
Indlela yokusebenzisa iisenzi zesiTaliyane 'Sapere' ne 'Conoscere'
Inkwenkwezi yeenkwenkwezi Inkcazo yomsebenzi: Mace Windu
I-Wilson Hope yeGalefu yeGolf
I-Best Mountaineering Glove System
IPent Pyramid yaseDahshur